Gudoomiye mise Madaxweyne? | Building Momentum
Gudoomiye mise Madaxweyne?
Posted on February 27, 2012 by somaliamomentum
Faallo-(Moment Media Group) Dadweynoow markaaad ciwaanka iyo su’aasha aragtaan, wax badan ayaa qalbigiina ku soo dhacaya, inta badan waxaa lumay eray bixintii jagooyinka iyo martabadahadadku kala lahaayeen, sida uu gebi ahaan u maax dumay oo hawada uga baxay hannaankii maamul iyo nidaam ee dalkeena.
Haddaba sheekadan, oo ka dhacday wadanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, ka dib markii laga wacay wafti balaadhan, oo metelayaybulshada Soomaaliyeed, shir loogu magacdaray Shirka Soomaaliya ee London. Waxaa maalintii 22-kii bishii Febraayo, isugu tegay wafti balaadhan oo ka socda qaybaha Soomaalida,maamullada iyo gebi ahaan xubnaha hadda metela, ee ku magaacaaban maamullada Soomaaliya ka jira, oo awal farabadnaan jiray oo kala duwanaa, haddase dalladda dowladda ku meelgaarka ahisugu yimaada, balse dhawr madaxweyne iyo Gudoomiyayaal kala duwan leh. Waa Hotelkii lagu casuumay Soomaalida, waxaana loo sameeyay casho sharaf, waxaa habeenkaas is baranayay waftigii Soomaaliyeed iyo qoladii loo martida ahaa, waa Dowladda Ingiriiska, waxaa meesha yimid Ra’iisal wasaaraha ingiriiskaiyo wafti weheliyey iyo ilaaladiisa, si ay isu sii bartaan madaxda Soomaalida,uuna ugu soo dhaweeyo dalkiisa. Waxaayu dhacday is barashadii sidan: Madaxweyne Shariif oo uu hore muuqaalkiisa u yaqaanay ayuu gacan qaaday, isuna sheegay, isagoo og inay kayimaadeen wadan wareersan oo dhib badan, lagana yaabo inuu qofka hilmaanku ku bato,dhibaatada haysata darteed! Waxuu yidhi: “WaaMr Cameron, waxaanan ahayRa’iisal wasaaraha Boqortooyada dalkan Britan” Madaxweyne shariif ayaa isuguna isu sheegay, soo dhawoowiyo mahadsanid ayay ku dhamaysteen. Waxuugacan qaaday Gudoomiyahii hore ee Shariif Xasan, isuna sheegay sidookale, isuguna isu sheegay inuu yahay Gudoomiyahay lagu dheganyahay, eeilaa hadda Jabhadda aan hubaysnayn ee Xamar joogtaa (Baarlamaanka Garabka Midig)ka daba laalaado, waxuuna ku yidhi nasiib wanaagsan ayaan kuu rajaynayaa, kusoo dhawoow carriga ingiriiska . Waxuuu gudbay dhinacii golaha wasiirrada, sida Ra’iisal wasaaraha, Wasiirka Gaashaandhigga,Wasiirka arrimaha gudaha, Warfaafinta iyo xubne kale, oo dowladda ku meelgaadhka ah, oo mid walba u sheegay jagadiisaiyo magaciisa, si fiicanna ay isu gacan qaadeen, soo dhawayntana ugagudoomeen. Waxuusoo gaadhay dhinaca Maamul goboleedyada, oo Miiska dhinaca kale ka fadhiyey, iyaga oo badnaa ayaa isbarashadu waxay ku billaabatay sidan: Mr Cameron : Waxaan ahay Ra’iisalWasaaraha Ingiriiska, magacayguna waa Mr Cameron Adigana?. Faroole :Waxaan ahay Madaxweynaha Puntland! Mr Cameron ayaa fahmi waayay oo umaleeyay madaxweyne ku soo qaldamay Miiska Soomaalida, waxuunaku yidhi: “Waa xagee Puntland? Ma Jasiiradbaa? Mise waa Jamhuuriyad?Ma Aasiyaa? Mise waa Afrika ? Halkani waxay u gaar tahay waftiga Soomaalida keliya, miyaad soo booqatay?”. Faroole : Waxaan ka mid ahay Soomaalida, waxaananahay Madaxweynaha Puntland! Mr Cameron : ooh, I Know you are the Governor of the Puntland Stateof Somalia (Waxaad tahay gudoomiyaha Maamul goboleedka Puntland) waan ku gartay, laakiin halkanwaa London, waa carriga ingiriiska, waxaanu aqoonsanahay keliya, Madaxweynaha dowladda ku meelgaadhka ah Shariif Ahmed! Waan ogahay inay Soomaalidu jeceshay erayga madaxweyne in loogu yeedho dhamaantood, balse, miyaad igarumaysanaysaa, wadanka ingiriiska oo dhami malaha hal madaxweyne, intaasiwaa iga kaftan, waxyaabaha shirkan loo qabtay ayaa waxaa ka mid ah, in madax la yaqaan iyo maamul layaqaan loo sameeyo Soomaaliya. Faroole: Waan ogahay inaadan aqoonsanayn inaan madaxweyne ahay, balse umadaydda ayaa i aqoonsan, marnaba qadiyaddaPuntland cid wax ka bedeli kartaa ma jirto. Mr Cameron: Maya waan ku aqoonsanahay, laakiin, Madaxweynaha Soomaaliya waa mid keliya, dooddaas dib ayaan u dhiganaynaa. Waxaa gudbay Ra’iisal wasaarihii, markaasuu gacanqaaday Madaxweynaha Maamul goboleedka Galmudugstate, Madaxweyne Caalin,oo markhaati ka ahaa waxii dhex maray Mr Cameron iyo Faroole, markaasuuweydiiyay, “Waxaan ahay Mr Cameron, Adiguna?” Markaasuu yidhi: “Aniguna waxaan ahay Mr Caalin, gudoomiyaha maamul goboleedka Galmudugsate” barasho wanaagsan iyo wanaagsan ayaalaysku dhaafay. Mr Cameron ayaa soo gaadhay Kursigii Gudoomiye Tarsan fadhiyey, markaasuu isu sheegay: “Waxaanahay Mr Cameron, Adiguna isu kay sheeg?”. Tarsan: “Waxaan ahay Tarsan, waxaanan ahay MaayerkaMuqdisho” Mr Cameron: Waan gartay, Adigu weli maad qaadanmiyaa shahaadada iyo digriiga madaxweynaha?. G.Tarsan: Maya weli, oo hadda ayaa magaaladu xor noqotay,laakiin waan ku jiraa inaan diyaariyo shahaadada haddii waqtigu ii saamaxo, teeda kale shirkan ayaa iigu horreeya shir caalami ahaan ka qaybgalo! Mr Cameron : Dabcan Soomaalida magacyadeeda marka naloosheegayo ama jagooyinkeeda waan ku wareernaa, Mar waa Amiir, Madaxweyne, Hogaamiye, iyo kuwa farabadan, oo iyaguna dhaqanka ah maalin walba mid cusub ayaa soo baxo, balsewaxaan isku dayeynaa inaan wada baranno kulli, waxaan kuu rajaynayaa guul. Halkaas ayuu barashadii ka siiwaday Ra’iisal wasaare David Cameron ilaa ay is wada barteen wafdigiiSoomaalida . Markii uu ka tegay Ra’iisalwasaaruhu goobta, ayaa waxaa kaftan dhex maray Gudoomiye Tarsan iyo Madaxweyne Caalin Gudoomiye, Tarsan ayaa weydiiyeyMadaxweyne Caalin: “miyaad tanaasushay sawdigaa jagadaydiisheegtay?!”. Madaxweyne Caalin ayaa ugu jawaabayisagoo dhoola cadaynaya war Tarsan illeen nixi maysid! Miyaadan arkay saaxiibkay Cabdiraxmaan Faroole waxii ku dhacay iyo meesha lala maray, meeshan Shariif uun baa laga yaqaanaa, Madaxweynekale ma aqoonsana, xitaa Somaliland oo naga weynayd hawadaa lagu dubtay,oo Madaxweyne Siilaanyo waa laga dhagaysan waayay Madaxweyneayaan ahay, maaniga cidi iga yeelaysaa saaxiib. Tarsan: Madaxweynayaal haddaydaan ahayn ee meelaha kale ka tihiin Gudoomiyeyaalmaxaad shacabkeena u wareerinaysaan oo aad madaxweyne iyo magacyadan aan laydiin aqoon kufalaysaan? Waad arkaysa markaad jagadayda sheegatay Gudoomiyonimada sidalayguu gartay. Caalin: “ku meelgaadhku hadduu dhamaadomadaxweynayaasha maamulgoboleeyadana waa dhamaanayaan gudoomiyeayay xaajadu isugu imanaysaa, oo waad aragataa in aanmadaxweyne aan kan Shariif ahayn cidna aqoonsanayn”. Tarsan: Aniguna waxaaban islahaa iska bedelMayorka, oo xerta madaxweynayaasha ku biir, laakiin hadda meeshayda haddiiloo soo wada noqday, waan iska daynayaa madaxweynenimada, waxaan iska ahaanayaagudoomiyahayga iyo maayerkayga!